Trilogy သည် All-IP Live Broadcast ထုတ်လုပ်မှုကိုထောက်ပံ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » trilogy ပာအားလုံး-IP ကိုတိုက်ရိုက်အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်မှုထောက်ပံ့
trilogy ပာအားလုံး-IP ကိုတိုက်ရိုက်အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်မှုထောက်ပံ့
trilogy ပာ, အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်မာစတာရည်ညွှန်းမီးစက်တစ်ဦးဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ဥရောပအသံလွှင့်ပြည်ထောင်စုထောက်ခံတဲ့သူစက်မှုလုပ်ငန်းမိတ်ဖက် (EBU) ၏အုပ်စုတစု၏တစ်ဦးအဖြစ်သူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့်တစ်ဦး၏ဘယ်လ်ဂျီယံအများပြည်သူထုတ်လွှင့် VRT ရဲ့အောင်မြင်သောဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုထားပါတယ် တိုက်ရိုက်လွှဂီတဖျော်ဖြေပွဲ 15 ဇန်နဝါရီလအပေါ်အားဖြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်စွမ်းရည်နှင့် IP ၏အကျိုးကျေးဇူးများသရုပ်ပြ, တစ်ခုလုံးထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်ကိုဖြတ်ပြီး IP ကို ​​အသုံးပြု. ။
ဝေးလံခေါင်ဖျားထုတ်လုပ်မှု set-up, သြဂုတ်လ 2015 အတွက်စီမံကိန်းကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အားဖြင့်သရုပ်ပြယခင်ကအပြည့်အဝ IP ကိုဒေသခံစတူဒီယို Set-up နှင့်တစ်ခု extension ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပရာနေရာ, Bozar အလယ်ပိုင်းဘရပ်ဆဲလ်အတွက်, တစ်ခုက IP ကွန်ယက်ကိုသယ်ဆောင်, တစ်ခုတည်း 10km ရှည်လျား optical fiber ကို cable ကိုအားဖြင့် VRT ဘရပ်ဆဲလ်မှာတိုက်ရိုက် IP ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အခန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
တိုက်ရိုက် IP ကို ​​setup ကိုတွင်ထည့်သွင်း Trilogy ရဲ့အ Gemini အားလုံးထံမှ CWDM နည်းပညာကိုဖြတ်ပြီးပြေး, matrix ကိုအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်, အိုင်ပီပြားနှင့်ကို virtual panel ကိုလျှောက်လွှာဖြန့်ဝေခဲ့သည် Nevion, optical bi-directional အိုင်ပီ-စီးတစ်ခုတည်း 10km ရှည်လျား optical fiber ကို cable ကိုအပေါ် modulated ခံရဖို့ enabled ထားတဲ့။
အဆိုပါ Gemini စနစ်ကပျက်ကွက်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအချက်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အန္တရာယ်များကိုဖယ်ရှားပေးသောဖြန့်ဝေ matrix ကို IP ကို-based ဗိသုကာအပေါ်အခြေခံသည်။ မီးတောက် + မှတဆင့်နောက်ထပ်ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ, Gemini တစ်ခုလုံးကိုထုတ်လွှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ဦး, ပေါင်းစုတစိတ်တပိုင်းအဖြစ်တင်းကျပ်တဲ့ခြုံငုံထိန်းချုပ်မှုအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်များကိုသေချာ။
optical cable ကိုကနေတဆင့်ချင်းစီဦးတည်ပို့ဆောင်အဆိုပါ IP ကိုဒေတာ Trilogy ရဲ့ Virtual Panel ကိုလျှောက်လွှာကနေတဆင့်လေး IP ကိုကင်မရာများ, 10 မိုက်ခရိုဖုန်း, Gemini အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေး, ထိန်းချုပ်အချက်ပြ, ကင်မရာပြန်လာအချက်ပြမှုများနှင့်တစ်ဦးကို virtual အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်ကချိတ်ဆက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အရေးကြီးတာက, Trilogy ရဲ့အ VoIP အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်၏အောင်းနေချိန်ကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ unnoticeable ခဲ့သောကြောင့်အနိမ့်ခဲ့သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ IP ကိုထိန်းချုပ်ပြားများနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးထိန်းချုပ်ပေးစီမံကိနျးအတှကျ software ကို-based ကို virtual panel က applications များ၏ Trilogy ရဲ့အရောနှော။ ကစမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, Desktop PC များနှင့်လူကြိုက်အများဆုံး operating system မြားအတှကျအထောကျပံ့နှင့်အတူလက်ပ်တော့များပေါ်တွင် install နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ trilogy ပာ၏ Virtual Panel ကို software ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောလက်လှမ်းမှတ်အသစ်တစ်ခုအဆင့်ကိုပေးပါသည်။
trilogy ပာကုန်ပစ္စည်းအထူးကုဆရာယောဟနျ Sparrow Trilogy ရဲ့ IP-based အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးရှေ့ဆောင်တစ်ဦးကုမ္ပဏီထက်ပို 15 ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်နှစ်ပေါင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးအဖြစ် "ဟုပြောသည်။ Gemini စတင်ချိန် မှစ. ဘက်ပေါင်းစုံ IP ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသုံးပြုသူများနှင့်အလွန်လူကြိုက်များဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးစုစုပေါင်းအိုင်ပီထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်အတွက်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်ရုံအရာကိုထပ်မံအသိအမှတ်ပြုအဖြစ်တိုက်ရိုက်အိုင်ပီစီမံကိန်းနှင့်ယင်း၏မိတ်ဖက်ကိုထောကျပံ့ဖို့ဂုဏ်ယူပါတယ်။ "
တိုက်ရိုက်လွှအိုင်ပီစီမံကိန်း, အ VRT Sandbox နည်းပညာ accelerator အစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, IP ကိုအပေါ်သီးသန့်မှီခိုတဲ့ပြည့်စုံ multivendor တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်၏အယူအဆ၏ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ VRT နှင့် EBU မောင်းနှင်နှင့် axon, Dwesam, D ကို & MS အပါအဝင်မိတ်ဖက်တစ်ဦးရှည်လျားသောစာရင်းစွမ်းအားဖြင့်, EVS, Genelec, မြက်ချိုင့်, Lawo, LSB, Nevion, Tektronix နှင့် Trilogy, ဒီအကျိုးတူတစ်ဦးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့အိုင်ပီထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းလည်းအပါအဝင်တည်ဆဲပွင့်လင်းစံချိန်စံညွှန်းကိုအသုံးပြုသည် SMPTE 2022-6, AES67 နှင့် PTP ။ ရလဒ်အနေနဲ့ကအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ၏မြင့်မားသောအဆင့်ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ EBU Gemini isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော တိုက်ရိုက်လွှအိုင်ပီ Trilogy ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် VRT 2016-01-28
ယခင်: အဆင့်မြင့်အသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်းမြန်မာများအတွက်ဒုတိယအနှစ်ပတ်လည်အသံလွှင့် Tech မှညီလာခံအိမ်ရှင်အဖြစ်
နောက်တစ်ခု: RTW နယူး EBU အသံကျယ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ထောက်ပံ့